Moewwaizaw — Steemit
အင်္ဂလိပ်သင်ယူသူထောင်ပေါင်းများစွာ၏နီကိုးလ် Maxali, အ WSE သင်တန်းကိုတက်စေသည် 80 ဇာတ်လမ်းတွဲတီဗီစီးရီးအတွက်ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍကသူအမေရိကန်သရုပ်ဆောင်ကနေစိတ်ခွန်အားနိုးမိန့်ခွန်းများနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုစီးရီးမှတဆင့်အာရှတိုက်တွင်က Wall Street အင်္ဂလိပ်စင်တာများမှာမကြာသေးမီကမှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။
နီကိုးလ်မတ်လ 2018. စဉ်အတွင်းလှုံ့ဆော်တည်းခိုနှင့်3နိုင်ငံများတလွှား 11 WSE ကျောင်းများတွင် 20 ကျော်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ရပ်များမှာသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များအတွက်သူမ၏အကွံဉာဏျ shared နီကိုးလ် WSE တောင်ကိုရီးယား, ဟောင်ကောင်နှင့် China.Nicole အတွက်သူမ၏ပရိသတ်များအနေဖြင့်ဧည့်ခံနှင့်အတူအံ့သြခဲ့ပါတယ် "Stillspinningandrecuperatingfrommy3weekAsiatour ကပြောပါတယ် ! ဘယ်မှာလေဘွေ ofa ခရီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်ငါသုံးနိုင်ငံများ, မြို့ငါးမြို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနှင့်ငါ၏အာရှတစ်တထောင်ကျော်ကဖြည့်ဆည်းတယ် fans.And ငါ၏အတိုက်ရိုက်စီးဗီဒီယိုများ China.It အတွက် 100,000 ကျော်ပရိတ်သတ်များအားဖြင့်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြ ... "
သူတို့အားပရိသတ်တွေထဲကတစ်ခုတခုရဲ့ဥပမာသံသယ, စိုးရိမ်မှုတွေ, စိန်ခေါ်မှုများရှိပါတယ်လျှင်နီကိုးလ်ရဲ့ဝေစုကိုတကယ်, သင့်အိပ်မက်တွေကိုသွားဖို့သင့်နက်ရှိုင်း voice.Follow သင်၏နှလုံးနားထောင်ရန်နေပါစေ us.Take အချိန်စိတ်အား "ဟု WSE ကျောင်းသားရှမွေလသည်ယန်ဖြစ်ပါသည်, အတားအဆီး။ "
နီကိုးလ်ရဲ့ဇာတ်ကောင် Khae သူမက New York မှာသူမ၏အိပ်မက်များကိုလိုက်ရှာအဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏သူမ၏ခရီးကိုလိုက်နာ advanced.Students မှစတင်ကနေ 20 အဆင့်ဆင့်၏သင်တန်းကျော်အင်္ဂလိပ်သင်ယူဖို့ WSE ကျောင်းသားများကိုကူညီပေးသည်သောတီဗီစီးရီးအတွက်အဓိကဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ WSE စင်တာများအတွက်ဖြစ်ရပ်များနီကိုးလ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူဖို့ related နိုင်ပါတယ်သူမက forward.This တွန်းထားရန်သူမ၏အသက်တာ၌ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျော်လွှားထားပြီးဘယ်လိုအကြောင်းစိတ်ခွန်အားနိုးမိန့်ခွန်းပေးခြင်းနှင့်ထောက်ခံမှုသင်ယူသူတစ်ဦးက Wall Street အင်္ဂလိပ် center.Nicolealsorananactingclasssharingsometoptipsfromherexperienceasan အတွက်အသင်းအနေဖြင့်အရထည့်သွင်း New York မှာသရုပ်ဆောင်နှင့်ထုတ်လုပ်သူ။
နီကိုးလ်ကိုပင်သူမ Busan, ဆိုးလ်က The ဟောင်ကောင် Flower Show ကိုနှင့် The Peak, ရှန်ဟိုင်း၌ Bundeli, အဆိုပါတားမြစ်ထားစီးတီးနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတည်းဟူသော Great Wall အပါအဝင်လည်ပတ်ခဲ့သည့်မြို့ကြီးများအတွက်မြင်ကွင်းများအချို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ထွက် သွား. ,
ကျနော်တို့နီကိုးလ် (သို့မဟုတ် Khae) အားပြီးခဲ့သည့်စကားလုံးထားခဲ့ပါမယ်!
"ဒီအာရှခရီးစဉ်ဖြစ်နိုင်သောဖွဲ့သောလူတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါသည် ... ငါအရှင်ဝေးထိုကဲ့သို့သောအောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသည်ဖို့မင်္ဂလာရယ်နှင့် ပို. ပင်ကျေးဇူးတင်ငါသည်ငါ့ job.This အားလုံး @wallstreetenglish_global @wsehk @ မပါဘဲဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဖြစ်ကမ္ဘာကြီးကိုသွားလာရ သင်တန်း WSE တရုတ် wsekorea နှင့် (wse.com.cn) "
နီကိုးလ်ရဲ့ခရီးစဉ်အချို့ကိုပိုပြီးနှင့်ဤ Facebook က post ကိုနှင့် Instagram ကို hashtag အပေါ် WSE စင်တာများပေါ်အတွက်ပျော်စရာဖြစ်ရပ်များထုတ်စစ်ဆေး: